ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၅)ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ Elysee နန်းတော်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတ Francois Hollande နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြင်ကွင်း ပုံရိပ်များ. ~ ဒီမိုဝေယံ
ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၅)ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ Elysee နန်းတော်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတ Francois Hollande နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြင်ကွင်း ပုံရိပ်များ.
ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၅)ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ Elysee နန်းတော်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတ
Francois Hollande နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြင်ကွင်း ပုံရိပ်များ.
Pics.. Thibault Camus
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ကင်းမဲ့...
ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် အိမ်တွင်းပုန်းနေတယ် ....
...ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈ...
စစ်အစိုးရ အကြောက်ဆုံးလူ သံမဏိလူသား ဘဘဦးဝင်းတင် ဈ...
ဘဘဦးဝင်းတင်အတွက် Free Burma Campaign (South Afric...
အာဏာရှင်ကို ဒူးမထောက် အညံ့မခံခဲတဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့...
ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကြီး...
သံမဏိလူသား ဘဘဦးဝင်းတင်အတွက် ဘဘဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်...
ဘဘဦးဝင်းတင် ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ၏ ဂျပန်...
DO & DON'T လောက်တော့ သိသင့်တယ်.. (ရေးသားသူ ဒေါက်တာ...
သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆန္ဒတော်အား ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း...
ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၅)ရက်နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ E...
အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ကင်းစံပြကျေးရွာ၊ ဝန...
နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူ ဂျပန်နို...
(ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို လုံးဝလက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း NL...
ဒီကိစ္စတွေ ဘယ်လို ဆက်လက်ဖြေရှင်းမလဲ ဦးခင်ရီဖြေပါ.....